Qarax weyn oo geystay dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay magaalada Kayseri ee dalka Turkiga – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Qarax weyn oo geystay dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay magaalada Kayseri ee dalka Turkiga
Qarax aad u xoogan islamarkaaana geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta ka dhacay magaalada Kayseri oo ku taalla bartamaha dalka Turkiga.
Qaraxaan ayaa sida la sheegayo lala beegsaday gaari bas ah oo ay saarnaayeen askar ku jirtay fasax, waxaana la xaqiijiyay ilaa iyo hada inay ku dhinteen 13 qof, halka uu dhaawaca ka badan yahay 56 ruux.
Dowladda Turkiga ayaa weerarkan ku eedeysay kooxda hubeysan ee kurdida PKK oo horey weeraro noocaan ah uga geystay dalkaasi.
Weerarkaan ayaa lagu soo beegay muddo isbuuc ka dib markii in ka badan 44 qof ay ku dhinteen labo qarax oo ka dhacay magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga.
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka dalka Turkiga Veysi Kaynak oo saxaafada la hadlay ayaa sheegay in qaraxaan u la mid yahay kuwii ka dhacay garoonka kooxda Besiktas ee magaalada Istanbuul.
Dhinaca kale, saraakiisha amniga ee dalka Turkiga ayaa sheegay inay qaraxa maanta u qabteen ilaa shan qof isla markaana baadi goob ugu jiraan 7 qof kale.
Ma jirto cid ilaa iyo haatan sheegatay mas’uuliyadda weerarka maanta, marka laga soo tago eedeynta ay dowladda Turkiga ku eedeeysay inay ka dambeeyaan kooxda Kurdiyiinta PKK oo horey weeraro ceynkaan oo kale ka geystay gudaha dalkaasi Turkiga.
Si kastaba, qaraxaan ayaa kusoo beegmaya muddo todobaad kadib markii qarax ceynkaan oo kale ah ay ku dhinteen 44 ruux uu ka dhacay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga, kaas oo ay sheegteen inay ka dambeeyeen kooxda Kurdiyiinta ah ee la magac baxday PKK.